Fernando Aramburu anokunda iyo National Narrative Award 2017 na "Patria" | Zvazvino Zvinyorwa
Yeye novel "Kumusha" makopi anodarika mazana mashanu ezviuru akatengeswa kubvira payakatengeswa muna500.000, saka hazvishamise kuti munyori wayo, Fernando Aramburu, ndine maawa mashoma apfuura iyo National Narrative Mubairo 2017.
Zvikonzero zvekupa mubairo uyu kumunyori weSan Sebastián, sekutaurwa kwaitwa neshumiro muchirevo chayo, ndezve "Kudzika kwepfungwa kwevanyori, kusanzwisisana kwenyaya uye kusangana kwemaonero, pamwe nechishuwo chekunyora nhoroondo yepasirese nezve mamwe makore anetsa muBasque Nyika". Naizvozvo, ivo havasi kushaya zvikonzero zvinopfuura zvakakwana kuti vamupe uyu mubairo wakakodzera. Sezvo iwe uchiziva zvechokwadi, iri mubairo wakapihwa zviuru makumi maviri emadhora, iyo inopihwa gore rega rega kumunyori wechiSpanish pabasa rakanyorwa mune chero mitauro yepamutemo uye rakaburitswa muSpain.
Zvinyorwa zvebhuku «Patria»
Zuva iro ETA razivisa nezvekusiiwa kwemaoko, Bittori anoenda kumakuva kunotaurira guva remurume wake, Txato, akauraiwa nemagandanga, kuti afunga kudzokera kuimba yavaigara. Achakwanisa kugara neavo vakamushungurudza kare uye mushure mekurwiswa kwakakanganisa hupenyu hwake uye hwemhuri yake? Achakwanisa kuziva kuti ndiani aive murume akapfeka ngowani akauraya murume wake rimwe zuva kuchinaya, paaidzoka kubva kukambani yekutakura? Hazvina mhosva kuti hunyengeri sei, kuvapo kwaBittori kuchachinja runyararo rwenhema rweguta, kunyanya muvakidzani wake Miren, aimbova shamwari yepedyo naamai vaJoxe Mari, gandanga rakapfigirwa uye anofungidzirwa nekutya kukuru kwaBittori. Chii chakaitika pakati pevakadzi vaviri ava? Chii chakasvibisa hupenyu hwevana vako nevarume vavo vakabatana munguva yakapfuura? Nemisodzi yavo yakavanzwa nekutenda kusingazungunuke, nemaronda avo nehushingi hwavo, nyaya isinganzwisisike yehupenyu hwavo pamberi uye shure kwegwenga raive kufa kwaTxato, rinotaura kwatiri nezvekusakwanisika kwekukanganwa uye kudiwa kwekuregererwa munharaunda yakaputsika. nekunyanyisa kwezvematongerwo enyika.
Iri ibhuku rinokosheswa zvikuru nevatsoropodzi nevaverengi vakatoriverenga. Kana iwe uchida kuziva kuti nei ichi chakanyanya kuzivikanwa nyika mubairo wakapihwa, iwe unofanirwa kuti uverenge.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Fernando Aramburu anokunda iyo National Narrative Award 2017 na «Patria»